true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html read 12 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
12.‎1 FUNDA LENDATSHANA
Isimo esiphakeme kakhulu Amandla.
Amandla achazwa njengesimo lapho kunomkhiqizo omningi khona omiswa okwesikhashana noma u-cwiliswa engeke awudonsele phansi noma awusongele.
Ukukhiqiza kusho isenzo sokuqeda okuthile. Ukuqedela umsebenzi, iphrojekthi noma into ewusizo noma ebalulekile noma okumele uyenze noma ube nayo.
Esimweni Samandla, kukhona izinga lokukhiqiza eliphakeme kakhulu eliqhubeka kulelo zinga eliphakeme. Kukhuphukele ebangeni elisha ngokuphelele. Kungase kube namaconsi wesikhashana, kepha kukhona ukukhiqizwa okuningi kakhulu ukuthi lokhu akubeki iSimo Samandla engozini.
Umbuzo ungabuzwa, “Umngakanani umsebenzi umuntu oyedwa angawenza?” Noma, “Zingaki izitini umakhi wezitini angazibeka ngosuku?”
Vele, umuntu angasebenza amahora amaningi kangaka ngosuku. Angathola kuphela ukukhiqizwa komuntu siqu okuningi ngosuku. Kepha angathola ukukhiqizwa okwenele ngosuku ukuze azisekele.
Angakhuphula umkhiqizo wakhe ube yinala kangangokuba angathatha ikhefu. Lokho kuya ngokukhanya kwakhe namandla okwenza izinto ngaphandle kokuchitha isikhathi noma umzamo.
Ezingeni elithile eliphakeme umakhi wezitini uzoshaya ukuthi zingaki izitini angazibeka. Ngokwandisa ukusebenza nokusebenza kahle, angagcina lelo banga lokukhiqiza likhuphuka, kancane kancane usuku ngalunye.
Uma ebeka izitini eziningi kangangokuba akekho umuntu oyoze acabange ukumxosha, useMandleni. Isimo Samandla Somuntu.
Isibalo sokubonisa isimo Samandla yisibalo esisezingeni eliphakeme kakhulu; ibanga elisha sha ekuthambekeleni Okujwayelekile (ukuqondiswa okujwayelekile kwento ethile).
Isibalo sokubonisa isimo Samandla akusona nje isibalo esikhuphuke ngamandla isikhathi eside. Futhi Amandla awasona nje isibalo esiphakeme kakhulu. Amandla akuyona into yangesonto elilodwa. Amandla i-trend.
Ukube ubungagrafa Isimo Samandla, kungabukeka okufana nalokhu:
Unganqamuli (yeka ukuxhumana noma ukuxhumana nabanye). Umthetho wokuqala Wesimo Samandla unganqamuli. Lokho kuzoletha inhlekelele kuwe nakunoma ngubani omunye umuntu othintekayo.
Abantu bayacasuka futhi bakhala ngokuthi abanye abantu banqamula ukuxhumana nabo.
Isibonelo, thatha umfana wendawo edolobheni ovele edume ngokungazelelwe. Ngemuva kokuba namandla amakhulu endaweni yamabhizinisi e-New York City, akabe esaphinda akhulume nanoma yimuphi wabangane bakhe edolobheni elidala. Abangani bakhe bakudala abajabule neze ngalokhu, cishe akwenzeki ukuthi akhulume nabo.
Nakhu okwenzekayo: Uma uke waba sendaweni lapho owaziwa kakhulu khona futhi waba umuntu owusaziwayo, abanye abantu ngeke bakholwe ukuthi usafuna ukukhuluma nabo. Bajwayele abantu abangasebenzisi i-Fomula Yamandla ngendlela efanele. Abantu balindele ngokuphelele ukuthi uzophula ingxenye yokuqala Yesimo Samandla, okungukuthi “unganqamuli.” Bacabanga ukuthi uzonqamula.
Ngakho-ke, uma usesikhundleni Samandla—musa ukunqamula!
Awukwazi ukuvele wenqabe (wenqabe ukubona noma ukwamukela) ukuxhumana kwakho.
Okufanele ukwenze wukubona ukuthi bayizi-xhumanisi zakho bese uthatha umthwalo wazo.
Bhala umsebenzi wakho noma isikhundla.
Kulesi sinyathelo kumele ubhale phansi lokho okwenzayo emsebenzini wakho nokuthi ukwenza kanjani. Ake sithi ubungumamukeli owamukela kahle kakhulu, ophumelela kakhulu kangangokuba wanyuselwa ekubeni ngumthengisi enkampanini yakho. Into yokuqala okufanele uyenze ukubhala wonke umsebenzi wakho njengomamukeli wezivakashi.
Nakekela ukubhala wonke umsebenzi wakho futhi ungashiyi lutho. Uma ungakwenzi lokho, uzosala nocezu lwalowo msebenzi isikhathi eside esizayo. Ngemuva konyaka noma ngaphezulu, umuntu othile usazoza kuwe, akubuze imibuzo yokuthi angawenza kanjani umsebenzi wokwamukela abantu.
Ngokubhala umsebenzi wakho ngokugcwele, wenza ukuthi umuntu olandelayo akwazi ukuwenza futhi awugcine useSimweni Samandla. Uyokwazi izinto eziqondile okungafanele azishintshe nokuthi yiziphi izinto okufanele aqhubeke ukuzenza. Kepha uma ungazibhali lezi zinto, angazishintsha, futhi leyo yindlela eqinisekile yokuthi uzogcina ubuyela emuva emsebenzini wakho wakudala—ungabe usasuka futhi.
Ngakho-ke, umthwalo wakho wemfanelo ukubhala umsebenzi uwunikeze ezandleni zomuntu ozowunakekela futhi wenze konke ongakwenza ukuze umsebenzi ukwazi ukubanjwa ngomunye umuntu.
Ngokwesibonelo somuntu owamukelayo onyuselwe esikhundleni kodwa wabuyiselwa emsebenzini wakhe wakudala, angathi: “Lababantu abasha abathatha imisebenzi yokwamukela abulungile. Abanendaba nje.”
Manje, ngaphambi kokuba agxeke kakhulu, kufanele ngabe wazibuza le mibuzo: Wake wawubhala yini umsebenzi? Ngabe wake wawushiya ngempela lo msebenzi? Ngabe wawushiya usesimweni sokuthi ungashiywa? Futhi-ke ngemuva kokuthi esehambile, wenza nje sengathi umsebenzi awukho noma ngabe wake wahamba ngendlela ethile wabuza owemukelayo omusha ukuthi izinto zihamba kanjani?
Akunakuba nokunqanyulwa okungazelelwe lapho usuka esikhundleni samandla.
Kungumsebenzi wakho ukubhala umsebenzi uwunikeze ezandleni zomuntu ozowunakekela. Yenza konke okusemandleni ukwenza ukuthi omunye umuntu angakwazi ukwenza lowo msebenzi. Ngoba ungaqiniseka ukuthi kungekudala kuzofika umuntu ozothatha lo msebenzi ngendlela efanele.